अब भर्ना | पेनी: पेन्सिल्भेनियालीहरूलाई स्वास्थ्य कवरेजसित जोड्ने
भर्ना गरौँ ।
तपाईं र तपाईंको परिवारको स्वास्थ्यसम्बन्धी सही जानकारी प्राप्त गर्न तयार हुनुहुन्छ? पेनि™ भर्ना हुन मद्दत गर्नेछ ।
यो भिडियोले तपाईं र तपाईंको परिवारलाई जानकारीको लागि भर्ना गर्न कत्तिको सजिलो छ भनेर देखाउँछ।
भर इन एस्पानोल ।
भर्ना सम्बन्धी आधारभूत कुराहरू
किनमेल गर्नुहोस् र योजना तुलना गर्नुहोस्, आवश्यक कागजातहरू जम्मा गर्नुहोस् र पेनीसँग अनलाइन साइन अप गर्नुहोस्।
खुला भर्ना के हो ?
यो तपाईंले स्वास्थ्य बिमा किन्न सक्ने वार्षिक अवधि हो। यदि तपाईँले यो समयमा भर्ना गर्नुभएन भने, तपाईँले अर्को सम्म साइन अप गर्न सक्नुहुन्न, सीमित दृष्टान्तहरू बाहेक, विशेष नामांकन अवधि भनिन्छ। पेनीको ओपन भर्ना अवधि नोभेम्बर १ देखि जनवरी १५ सम्म वार्षिक चल्छ।
खुला भर्नाले कसरी काम गर्छ
विशेष भर्ना के हो ?
यदि तपाईँले स्वास्थ्य कवरेज हराउने, सर्ने, विवाह गर्ने वा बच्चा जन्माउने लगायत केही क्वालिफाइङ लाइफ इभेन्ट्स (क्यूएलई) अनुभव गर्नुभएको छ भने खुला नामांकन बाहिर भर्ना हुन सक्नुहुन्छ।
विशेष भर्ना को बारेमा थप सिक्नुहोस्
यो तपाईंले स्वास्थ्य बिमा किन्न सक्ने वार्षिक अवधि हो। यदि तपाईँले यो समयमा भर्ना गर्नुभएन भने, तपाईँले अर्को सम्म साइन अप गर्न सक्नुहुन्न, सीमित दृष्टान्तहरू बाहेक, विशेष नामांकन अवधि भनिन्छ। पेन्सिलभेनियाको खुल्ला भर्ना अवधि नोभेम्बर १, २०२० देखि जनवरी १५, २०२१ सम्म चल्छ
मैले आफ्नो स्वास्थ्य बिमा योजना किन नवीकरण गर्नुपर्छ?
यदि तपाईँको हालको healthcare.gov योजना अझै उपलब्ध छ र तपाईँले कुनै ठूलो परिवर्तन गर्नुभएको छैन भने, तपाईँले यसलाई राख्न सक्नुहुन्छ । तपाईंले उपलब्ध सर्वोत्तम स्वास्थ्य योजना प्राप्त गरिरहनुभएको छ कि छैन पक्का गर्न वर्षेनी योजना तथा मूल्यहरू तुलना गर्नु अझै महत्त्वपूर्ण छ। पेनीले तपाईंलाई सजिलै किनमेल गर्न र तुलना गर्न अनि आर्थिक सहयोगको लागि योग्य हुनुहुन्छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउन मदत गर्छिन्।
स्वत: नवीकरणका बारेमा बढी सिक्नुहोस्
यदि तपाईँले स्वास्थ्य कवरेज हराउने, सर्ने, विवाह गर्ने वा बच्चा जन्माउने लगायत केही योग्यता जीवनका घटनाहरू अनुभव गर्नुभएको छ भने खुला नामांकन बाहिर भर्ना हुन सक्नुहुन्छ।
योजनातुलना गर्नुहोस् र छिटो उद्धरण प्राप्त गर्नुहोस्
पेनीले तपाईंलाई विभिन्न स्वास्थ्य बिमा योजनाहरूको मूल्य तथा आवरण विकल्पहरू किनमेल गर्न र तुलना गर्न मदत गर्छ।
आवरणका लागि लागू गर्नुहोस्
जब यो लागू गर्ने समय हो, हालैको वेतन स्टब, ठेगानाको प्रमाण, र आफ्नो परिवारको बारेमा अन्य विवरणहरू जस्ता महत्वपूर्ण जानकारी काम भएको निश्चित गर्नुहोस्।
पहिलो महिनाको प्रिमियम तिर्नुहोस्
थुप्रै योजनाले तपाईंलाई अनलाइन पैसा तिर्न मदत गर्छ। कृपया ध्यान दिनुहोस्, तपाईँले आफ्नो पहिलो महिनाको प्रिमियम भुक्तानी नगरेसम्म तपाईँको कवरेज सुरु हुन सक्दैन, जुन नीति प्रभावकारी मिति भन्दा पहिले देय हुन्छ। (जस्तै: १/१/२२)
तपाईं र तपाईंको परिवारको स्वास्थ्य बिमा छ भनेर थाह पाउँदा मनोशान्तिको आनन्द उठाउनुहोस्। आवश् यक हेरचाह गर्न आफ्नो आवश् यकता पूरा गर्न आफ्नो आवश् यकता प्रयोग गर्न थाल्नुहोस् ।
तपाईँले नामांकन सुरु गर्नु भन्दा पहिले निम्न जम्मा गर्नुहोस्:
Photo ID(s) (चालक अनुमतिपत्र, पासपोर्ट वा तपाईंको पहिचान प्रमाणित गर्ने अन्य विकल्प)
सामाजिक सुरक्षा नम्बर(हरू)
भुक्तानी स्टबको अन्तिम ४ हप्ता
आप्रवासन कागजातहरू, लागू भएमा
हालैका कर फर्काऊ(हरू)
अझै पनि अलि अत्तालिएको महसुस हुन्छ ? हामी पनि त्यहाँ थियौं - त्यसैले हामीले केही मद्दत वा मार्गदर्शन प्राप्त गर्ने विभिन्न तरिकाहरू स्थापना गऱ्यौं।
पेनीबाट महत्त्वपूर्ण समाचार र अद्यावधिकका लागि साइन अप गर्नुहोस्
तपाईंको सम्पर्क जानकारी गोप्य र गोप्य राखिनेछ ।
RecordTypeId (लुकाइएको, कडा सङ्केतन गरिएको)
Pennie.com सब्सक्राइबर (लुकाइएको, कडा सङ्केतन गरिएको)
CMR सम्पर्क स्थिति (लुकाइएको, कडा सङ्केतन गरिएको)
स्रोत (लुकाइएको, कडा सङ्केतन गरिएको)
यो फाँट प्रमाणीकरण उद्देश्यका लागि हो र अपरिवर्तित छोडिनु पर्दछ ।